Chii chinonzi Artificial Intelligence Chiri Kuchinja Kumeso Kwekutengesa? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, chitoro, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
chakagadzirwa Intelligence iri kuchinja kumeso kwenyika ino muzvikamu zvakawanda. Iri kuita kukanganisa kune ese maindasitiri kusanganisira kutengesa chikamu. Kwemakore gumi apfuura, iyo yekutengesa chikamu yakaona yakawanda tekinoroji yekufambira mberi uye bhizinesi modhi yemhando. Kunyangwe vatengi izvozvi vari kugamuchira tekinoroji nemaoko maviri uye vachiiita chikamu chechavo chekutenga.
Ikozvino, kutenga hakugumiri kune zvidhinha-ne-dhaka uye kwakawedzera kusvika kune inoshanda uye ine zvibereko ruzivo rwe Indaneti retail marketing, m-commerce uye e-zvokutengeserana. Zvakafanana nekuti chitoro chikuru chiri muhomwe mako. Muenzaniso mukurusa wechitoro chinotengesa Amazon.com irikugadzira zvinopfuura makumi mana muzana zvemari pagore. Izvo zvave kunyanya kufarirwa pamwe nekufambira mberi kweAI mazano ayo anofanirwa kuitwa mukushandisa.
The online zvitoro vanozivikanwa se Chaiyo-nguva chigadzirwa chinongedzo mavanotarisa mutengi zvinoenderana nezvavaitsvaga kana zvavanofarira. Zvino, ivo vari kushandisa Retail uye Technology kushandura zvinotungamira nerubatsiro rweAI iyo inotaurirana nevatengi vanopa zvemagariro mameseji. Maitiro aya anozivikanwa se Kukurukurirana Commerce. Izvi zvakawedzera ramangwana re-e-commerce musika uye zvine simba rakakura mukutengesa chikamu.
Izvo zvinofungidzirwa kuti mu2020, zvinopfuura makumi masere muzana ehurukuro ichaitwa nemachina nechero kudyidzana kwevanhu kudivi rekambani. Kunyangwe na80, iwo manzwi uye kutarisana nemeso masisitimu anoshandiswa nevatengi ayo anozovapa nerubatsiro rwe digital. Izvi zvese zvinoitwa kupa yakanakisa mushandisi ruzivo inowanikwa nezvitoro.
Internet Retailing kana e-Tailing
Kana kutengesa kwaitwa kuburikidza Indaneti asi iyo nzira yakafanana neyezvidhinha-uye-dhaka senge e-commerce, advertising, branding, kurongeka kuzadzikiswa, webhusaiti manejimendi, uye. mangetani ekupa management. Iyi nzvimbo inofamba zvishoma nezvishoma zvichienderana ne kufungidzira kuongororwa uye AI zvikamu zvino zvasanganisirwa mune yekutengesa chikamu chinovandudza kushanda kwakazara munzvimbo dzakasiyana. Iyo nharaunda inosanganisira akawanda akakosha mapoinzi senge kukwidziridzwa, mitengo, uye manejimendi ezvivakwa, yemuno musika uye tarisiro vateereri.
Kunze kweizvi, makambani anotengesa ari kutora mukana chitoro analytics iri kukura neiyo yepamusoro FractalAnalytics uye SAS inovandudza kuita kwese kwemaindasitiri. Zvino, pane izvo pfungwa senge yekutengesa kuongorora, kufungidzira uye mutengi kuita munhu izvo zvachinja nzira iyo mutengi aishandisa kutenga zvigadzirwa uye optimize iyo mangetani ekupa zvebhizinesi.
Makambani paanoronga kuunza bhizinesi ravo online ndiyo yaive nguva, vakabva vapa mutengi mukana wekukura navo. Zviri nyore kutengesa uye kutenga chigadzirwa online nerubatsiro rwehombe Mapuratifomu zvakadai seAmazon nerubatsiro rwe Indaneti. Aya masaiti epamhepo ave kushandisa maChatbots akaita hurukuro pakati pemutengesi nemutengi zviri nyore.
Zvino, kune matekinoroji anobatsira mukuvandudza mwero wekushandurwa nenzira yakasarudzika uye yakasarudzika. Izvi kushambadzira nekutengesa maitiro inogoneswa zvakakwana neAI iyo yaita kuti e-commerce ive nenjere. Kune makambani anopa kufungidzira kutungamira kurovera ruzivo uye ruzivo munzira dzekugadzira zvimwe zvigadzirwa zvekutengesa. Kune matekinoroji akadai se mamiriro ekutengesa mameseji uye kufungidzira ungwaru izvo zviri kuchinja nzira dzekubatanidza mutengesi nemeseji chaiyo panguva yakakodzera yekuvimbisa kutengesa.
Chitoro chinotengesa zvakare
Nekuwedzera kwenyika yehunyanzvi, zvitoro-nezvitoro zviri kusangana nematambudziko akawanda. Kune zvitoro zvakawanda zvakavharwa nekuda kwekurasikirwa uye vamwe vari padanho rekuvhara zvitoro zvavo. Nekudaro, pane nzira dzekuti zvitoro zvekutengesa izvi zvinogona kuvandudzwa nekushandurwa kuita chimwe chinhu chinogona kukwezva nekuchengetedza vatengi kunyangwe mune renyika rehunyanzvi.
The marobhoti tekinoroji inoiswa pasi pekutariswa kwemuzvitoro izvo zvinogona kuvandudza mashandiro echitoro uye kunyange kupa sevhisi sevanhu kune vatengi. Iwo marobhoti anogadzirwa nenzira yekuti anogona kuteedzera masheya uye hesitori yekudzoreredza masherufu nekukurumidza. Ivo vanotoshandiswa mune imwe mangetani ekupa sectors zvakare.
Nei uchiwedzera AI muRetailing Sector?
Kutenga pamhepo chikomborero mukuvanzika kune munhu ane nguva shoma nepurogiramu yakabatikana. Izvo zviri nyore kwazvo kuti vatengi vari kungotsikisa pasi mafoni avo pane kushandisa maawa muzvitoro nekudzoka vasina maoko. Zvisinei, zvinhu zvese hazvigone kuve zvakakwana; Saizvozvowo, iyo e-commerce musika ine mashoma mashoma zvakare izvo zvakaita kuti varasikirwe nevatengi vanokosheswa vatengi.
Zvisinei, ikozvino nguva yachinja. Nekuitwa kweAI muindasitiri, yatora matanho matsva akananga kune ramangwana riri kukura. Iyo rakapotsa chokwadi ikozvino iri kuita vateereri nekuvandudza ruzivo rwevashandisi munyika yekutengesa zvakare.
1. Chiitiko cheMunhu
Dambudziko hombe rakatarisana nevatengi vazhinji nderekuti havanzwe kana kana kuona chigadzirwa vasati vaisa mari mairi. Izvi zvakaita kuti vakanzure odha yavo uye pamwe iwe ucharasikirwa nemutengi zvachose. AI yakakunda dambudziko iri inzira iri nyore kwazvo. Iye zvino, zvakabvumidza vatengi kuve neruzivo rwemunhu uye kutenga chete kana vagutsikana.
Pane sarudzo dzinokutendera kuti uone uye unzwe kana chigaro chichataridzika zvakanaka kumba kwako kana kwete. Iwe unogona kutomboedza kupfeka mbichana uye woona kuti unotaridzika sei muvara kana dhizaini. Paunenge iwe wagutsikana, chingozoita kuti utenge neimwe nzira enda kune chinotevera chigadzirwa.
2. Stock Kuongorora
Kurasikirwa kukuru kambani inofanirwa kutsungirira kurasikirwa nemutengi. Kunyanya, kana zvikaitika nekuda kwedambudziko rekunze kwemasheya ivo vanobva vazvivenga. Inowedzera mukana wekuti mutengi agumbuke nezve ichi chinhu kunyanya kana ichive irikuramba iri purogiramu.
Kune imwe nzira, kana munhu akatenga zvinhu zvakawanda asi ivo vasina kutengesa kunze sekufungidzirwa saka ndiko kurasikirwa kukuru. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakosha kuti uwane mhinduro inodzivirira chero kurasikirwa kwekuwedzera kwevatengi kana kudzivirira kutambisa. AI tekinoroji inogona kubatsira mukutarisa masheya ako uye inogona kubatsira mukugadzirisa zvekare hesitori nekukurumidza sezvazvinogona kubatsira iwe pamwe nemutengi.
3. Kuwedzera Kutengesa nekuRumbidza Zvigadzirwa
Machine pakudzidza ikozvino iri kubatsira maitiro ekutengesa nenzira yakavandudzwa zvakanyanya. Iyo yepamusoro vhezheni yeAI tekinoroji inobvumira mutengesi ku nzwisisa zvinodiwa nevatengi uye maitiro. Nekubatsira kweiyi ongororo, ivo vanogona kupa iyo yekutengesa sevhisi kune mutengi. Izvi zvine chinangwa chekugadzira chisungo chakavimbika pakati pemutengesi nemutengi izvo zvinoita kuti vadzokere kwauri kuti vatenge kutenga kutsva.
Iyo AI yakaratidza iyi nyika yese kuti zvino ndiyo nguva yakakwana yekumbundira hwetekiniki yepasi senge mune ramangwana riri pedyo; iyo digitalization ichaenda kunotora ino nyika. Nerubatsiro rweiyi tekinoroji, mutengesi anogona kungobudirira mumunda wavo. Nekudaro, kana iwe wakamirira iyo nguva saka zviite izvozvi uye iwe unenge usina kana chekuzvidemba mune ramangwana. Kana paine chero chinhu, icho chinongovhura chete nzira nyowani dzekuwedzera yako kugadzirwa uye bhizinesi musika mufananidzo.
Unoda tech solution yebhizinesi? Taura nekutaurirana